दिउँसोको ०१ : २४
रन्थनिएको बेलामा बसेर, उठेर, सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर गुनासो गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठक...
saralpatrika.com . १३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अमेरिकी विद्यालयको सुरक्षामा ध्यान दिन ट्रम्पको सुझाव
पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्नुको साटो देशकै विद्यालयहरूका सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । टेक्ससमा १९ विद्यार्थीको हत्या भएको केही दिनपछि उनले ...
saralpatrika.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मुस्ताङ । मुस्ताङको लोमान्थाङमा शुक्रबारदेखि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको ‘तिजी’ पर्व मनाउन सुरु भएको छ । लोमान्थाङ दरबारमा बौद्ध धर्मगुरु पदम्सम्वा रिम्पोचेको तस्बिर अङ्कित ठूलो आकारको थाङ्का प्र...
saralpatrika.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरण र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन र जलविद्युतको राम्रो उपयोग गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने सहमत भएका छ । काठमाड...
saralpatrika.com . १६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा विभिन्न १३ वटा सडक परियोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सम्वद्ध अधिकारी विरुद...
काठमाडौं । भक्तपुरमा सरकारी जग्गा बिक्री गर्न बैना रक लिइ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । भक्तपुरको साविक सुडाल गाविस–४ को कित्ता नम्बर ३९९ को ४ आना सरकारी जग्गा व्यक्ति हो भन...
saralpatrika.com . १७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पत्नी हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइराला पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्ट्याएको भोलिपल्टै शुक्रबार साँझ कोइराला पक्राउ परेका हुन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रम...
सात करोड माग्दै धम्क्याउने सात जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले धाकधम्की दिई सात करोड रुपैयाँ माग गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले योजनाबद्ध रुपमा पीडितलाई भेटेर तथा टेलिफोन गरी सात करोड रुपै...
saralpatrika.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एमालेले लोकप्रिय मत पाएको टर्चबालेर हेर्दा पनि नि देखिँदैनः मिनेन्द्र रिजाल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारुढ दलका सांसदले समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदले भने विरोध जनाएका छन् । यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेव...
निजगढ विमानस्थल निर्माण रोकिनु आपत्तिजनकः माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले ...
saralpatrika.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर
अफगानिस्तानमा बिग्रँदै गएको आर्थिक र मानवीय सङ्कटको बीचमा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर रहेको बताएका छन् । उच्चायुक्...
उद्योगमन्त्रीका अमर्यादित शब्द हटाउन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय मूल्य तथा मान्यताभन्दा बाहिर गएर बोलिएका अमर्यादित शब्द हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपू...
saralpatrika.com . २२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । सङ्गठनले ...
बैंकको ब्याजदर बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षक...
saralpatrika.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लगाउँदै आएको कर समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा हाल लगाइँदै आएको कर समायोजन गर्...
saralpatrika.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
देशभर १४ हजार ४०२ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । हालसम्म परिणाम सार्वजनिक भएका पालिकाको अन्तिम मतपरिणामका आधारमा निर्विरोधसहित उक्त सङ्ख्यामा महिला निर्वाचित भएका हुन् । सो ...
झापा । धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरुलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा ...
काठमाडौंलाई पूर्ण विकसित र विश्वकै उत्कृष्ट बनाउन मेरो क्षमता लगाउनेछुः बालेन साह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहले आफ्नो सम्पूर्ण समय महानगरपालिकाको व्यवस्थापनका लागि दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मेयरमा निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिंदै उनले अबको ...
बाजुराको बुढीगंगामा पुनः मतदान हुने
काठमाडौँ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।चुनाव निष्पक्ष नभएको ठहर गर्दै आयोगले वैशाख ३० को निर्वाचन कार्यक्रम र...
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकामा बिहीबारदेखि मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको छ । भक्तपुरको कटुञ्जेस्थित खानेपानी ट्याङ्कीबाट भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्म मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको हो । ...
युरोपमा मङ्कीपक्स सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढ्दै
युरोपेली मुलुकहरुमा पछिल्लो समय मङ्कीपक्सबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । युरोपेली स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मङ्कीपक्स फैलिएका मुलुकहरुमा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । सङ्क्र...
रुसद्वारा युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीले डोन्बास क्षेत्रमा रूसले गरेको आक्रमणका कारण उक्त क्षेत्र बसोबासका लागि अनुपयुक्त हुनसक्ने बताएका छन् । टेलिभिजनमार्फत् गरिएको सम्बोधनका क्रममा उनले पूर्वी...
काठमाडौंको मेयरमा बालेन साह निर्वाचित
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन साह निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका साहले कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्...
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले तथा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजबीच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । मन्त्री आले तथा राजदूत डिप्रेजबीच नेपा...
सर्वोच्च अदालतद्वारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर...
नीति तथा कार्यक्रममाथि ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही जेठ १० गते प्रतिनिधिसभाको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि दुबै सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । छलफल दुई दिनसम्म जा...
रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने सर्वोच्चको फैसला बदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला बदर गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्...
चिनियाँ विदेशमन्त्री दक्षिण प्रशान्त महासागरका राष्ट्रहरुको भ्रमणमा
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विशेष चासोका बीच चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले साना तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण टापु राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन बिहीबारदेखि दक्षिण प्रशान्त टापुका देशहरूको औप...
अफगानिस्तानमा बम विष्फोटमा परी कम्तिमा १६ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तानमा मिनीबस र एउटा मस्जिदमा भएका चारवटा बम विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा १६ पुगेको छ । यसमध्ये केही आक्रमणहरू इस्लामिक समूहले जिम्मा लिएका छन् । तालिबानले गत अगस्टमा सत्ता क...
शेयर बजारमा ८ अंकको बृद्धि
काठमाडौं । शेयर बजार नेप्से बिहीबार ८ दशमलव ०३ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय ३९ दशमलव ६० विन्दुमा पुगेको छ । बिहीबार बैंक, व्यापार, बीमा, उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, म्युचल फन्ड र लगानी समूहको शेयर साम...
अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छुः मेयर महर्जन
– सञ्चिता घिमिरे/चन्द्रकला थापा, ललितपुर । कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्र...
आइतबार पनि राहदानी विभाग खुल्ने
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले आइतबारसमेत सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । विद्युतीय राहदानी सहजरुपमा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विभागले बुधबार यस्तो निर्णय गर...
सत्तापक्षले निर्वाचनमा धाँधली गरेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले नभएको बताएका छन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बिहीबार भाग लिँ...
हुम्लामा पहुँचका भरमा जहाजको टिकट वितरण
जाजरकोट । पहुँचको भरमा जहाजको टिकट वितरण हुँदा हुम्लाको हवाई यात्रा असहज बनेको छ । हवाइमार्ग भएर यात्रा गर्दा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ । टिकट पाउन सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । हुम्लामा निज...
saralpatrika.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सिन्धुपाल्चोक । लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको दुईकिलोमा एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परी एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । गएराति खाडीचौर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बा२०च ६३२७ नम्बरको एम्बुलेन्स दुर्घटन...
विश्वका धेरै देशमा फैलिएको मङ्कीपक्स विरुद्ध फ्रान्समा खोप अभियान चलाइने भएको छ । फ्रान्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणले मङ्कीपक्सविरुद्ध अति छिटो सतर्कता अपनाउदै प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक उप...
रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले असर पारेको भन्दै हङ्गेरीमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्वानले मङ्गलबार नयाँ सरकार गठनसँगै सङ्कटकाल घोषणा गरेका हुन् । आदेश यही मे २४ ...
थप तीन देशमा पहिलो पटक मङ्कीपक्सका नयाँ बिरामी फेला
संयुक्त अरब एमिरेट्स् (यूएई) मङ्कीपक्स रोगको नयाँ बिरामी फेला पर्ने पहिलो खाडी राष्ट्र बनेको छ । चेक रिपब्लिक र स्लोभिनिआमा पनि मङ्गलबार पहिलो पल्ट मङ्कीपक्सका बिरामी भेटिएको पुष्टि भएको थियो। अफ्...
काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको १२ दिन पुगे पनि अझै ५ पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, रौटहटको गरुडा र फतुवा विजयपुर न...
saralpatrika.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
थप पाँच जनालाई कोरोना सङ्क्रमण
काठमाडौं । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप पाँच जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सो अवधिमा दुई हजार ७१७ जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । एक हजार ८८९ जनाले पिसिआर र ८२८ जनाको एन्टिजिन विधिबा...
ratopati.com . ८ घण्टा अघि
lokaantar.com . ७ घण्टा अघि
काठमाडौँको नगरसभा र कार्यपालिकामा काँग्रेसको बहुमत, मेयर–उपमेयरलाई चुनौती
ratopati.com . ४ घण्टा अघि
विश्वमा खाद्यान्न अभावका लागि अमेरिका जिम्मेवार : रुस
शरीरमा भिटामिन डीको कमी कसरी थाहा पाउने ?
ratopati.com . ६ घण्टा अघि
त्रियुगाको मेयरमा कांग्रेसका बसन्तकुमारले बढाए अग्रता
onlinekhabar.com . ५ घण्टा अघि
झन्डै ५०० फिट अग्लो भीरमा अड्किएको मान्छेको हेलिकप्टरबाट उद्धार
bbc.com . ५ घण्टा अघि
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक माझीले ५०० फिट अग्लो भीरमा एक जना व्यक्तिलाई अड्किएको देखे। तलबाट उद्धार सम्भव नभएपछि हेलिकप्टरबाट उनको उद्धार गरिएको थियो। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।
काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसको एकल बहुमत, बालेनलाई कति सहज?
nepallive.com . ६ घण्टा अघि